Ny Fitiavan-tanindrazana Ahazoan-tombon’ny Fifankatiavan’i Vladimir Poutine Sy Ireo Mpitondra Môtô · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Mey 2015 7:18 GMT
Vakio amin'ny teny русский, polski, Deutsch, srpski, Magyar, Español, English
Marina fa tsy tena vaovao ny fifankatiavan'i Poutine sy ireo mpitondra môtô. Niditra voalohany tao amin'ilay vondrona izy tamin'ny fandehandehanana ny volana Aogositra 2011, narahana kidaombaramita be mihitsy. Tamin'ireo taona nanaraka izany, matetika i Poutine no mihaona amin'ny Night Wolves, vokany dia indraindray hita taraiky amin'ny fihaonana miaraka amin'ireo.
Hatry ny nahazoan'i Rosia an'i Krimea indray sy nanombohany nanohana ireo mpisintaka any Okraina atsinanana, lasa fikambanana politika misokatra kokoa ireo Night Wolves, izay tarihan'i Alexander Zaldostanov (fantatry ny maro amin'ny hoe “ilay Mpandidy”), izay milaza ny heviny fa lasa “fitaovana ankatoavin'ny fanjakana maneho ny diplômasiam-bahoaka” ny fikambanany.
Ny volana Martsa, tamin'ny voalohandohan'ity taona ity, nanambara tetikasa handeha hanavatsava an'i Moscow ka hatrany Berlin ny Night Wolves, ho fanomezam-boninahitra ny fankalazàna ny faha-70 taonan'ny fandresen'ny Firaisana Sovietika tamin'ny Ady Lehibe Faharoa. Nomanina hiainga any Moscow ny 25 Aprily ny ekipan'ny mpitaingina môtô, ary manaraka ny làlan'ny Tafika Mena, any Bielôrosia, Pôlônina , Slovakia, ny Repoblika Tchèque, ary Aotrisy, alohan'ny hahatongavany ao Alemàna ny 9 May.
Tamin'ny filazàn'ny Praiminisitr'i Pôlônina azy io ho fihantsiana, dia niampanga avy hatrany ilay tetikasa izy, tamin'ny fitanisàny ny fanohanan'ny Night Wolves ireo hetsik'i Rosia ataony any Okraina. Ny 27 Aprily, nosakanan'ny manampahefana Polone ireo Night Wolves ampolony tany amin'ny sisintany iarahany amin'ny Bielôrosia. Telo andro taty aoriana anefa, nanambara i Zaldostanov fa nahavita niditra tao Pôlônina ny sasany amin'ireo mpikambana ao amin'ny vondrona, ary nahavita nanohy ny làlany ho any Alemàna ihany ny farany ireo mpandeha môtô.
Ny 6 May, taorian'ny fisalasalàna maro, nilaza ireo tompon'andrakitra Alemàna fa tsy misy antony ara-dalàna mihitsy afaka mandrara ny zon'ny Night Wolves mba handeha hanavatsava an'i Berlin, izay nataon'ilay vondrona ny 9 May, raha nankalaza ny Andro Fandreseny i Rosia.
Nisintona ny fijerin'ny maro ny Night Wolves tao amin'ny media sosialy, izay nisy ireo mpampiasa Aterineto maro nirohotra tao amin'ireo vondrom-piarahamonina ao amin'ny VKontakte natao ho an'ireo fikambanana mpitondra môtô, mba hirary soa azy ireo hahatanteraka soa ny diany, ary hiarahaba ilay ekipa any Berlin. Ny sasany nilaza ny hasosorany tamin'ny fomba nandraisana ireo mpitondra môtô ireo tany ivelany, mahita izany ho fanafintohinana ny fankalazana fahatsiarovana ireo matin'ny ady tao Rosia.
Ny 13 May, nifoha tamin'ireo vaovao tsara maro ny Night Wolves tany Sébastopol, izay nanomezan'ireo manampahefana teo an-toerana ireo mpitondra môtô tany mirefy 227 hektara (eo amin'ny 560 acres) mba hampiroboroboana ny fanatanjahantena, ary ny “fampianarana fitiavan-tanindrazana ara-tafika.” Manofa mora be ilay tany ilay vondrona, mandoa 0,1 isanjaton'ny tetibidin'ireo toerana fotsiny, izay tombanana ho 1,2 lavitrisa robla (24,4 tapitrisa dolara).